Steamcompmgr, StumpWM, Sonkor, SwayWM iyo TWM: 5 WM oo kale oo loogu talagalay Linux | Laga soo bilaabo Linux
Steamcompmgr, StumpWM, Sonkor, SwayWM iyo TWM: 5 WMs kale oo loogu talagalay Linux
Maanta waxaan sii wadaynaa kuweena booska sideedaad ku saabsan Maareeyayaasha Daaqadaha (Maareeyayaasha Windows - WM, Ingiriis ahaan), halkaas oo aan dib ugu eegi doonno waxyaabaha soo socda 5, liiskayaga 50 hore looga hadlay.
"Maareeyaha Daaqadda iyo halabuurka loo sameeyay in lagu qoro qaab ahaan (steamos-session) qaybta 'Distro GNU / Linux SteamOS', taas oo iyana, si gaar ah loogu sameeyay Steam Machines / Steamboxes".
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaadey in kabadan 4 sano kahor.
La bixiyay is dhexgal ku qanacsan oo lala yeesho serverka X, iyo sidoo kale istcimaalka isticmaalaha Steam.
Waxay u shaqeysay sidii Maamulaha Daaqadda iyo halabuur isla waqtiga ay ciyaaruhu socdeen, halka waqtiga intiisa kalena ay la falgashay "gnome-session" iyo "gnome3" si loo fududeeyo khibrad adeegsade wanaagsan.
Waxaa loogu talagalay inay u shaqeyso sida ugu yar ee suurtogalka ah, iyadoo la ilaalinayo barnaamijka Steam, iyo iyadoo la dheereeyo ciyaarta lafteeda, hore iyo bartamaha oo buuxa.
Rakibaadda iyo isticmaalkeeda waxaa lagu sameyn karaa oo keliya SteamOS gudahood Skooxda Mashiinnada / Steamboxes, taas oo aakhirka aan nolol ganacsi oo guuleysata helin. Si kastaba ha noqotee, wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan SteamOS waxaad riixi kartaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
"AMAn X11 maareeyaha daaqada ee nooca Tiling, oo lagu maamulo kumbuyuutarka oo si buuxda loogu qoray luqadda barnaamijka Lisp Common".
IIsku day inaad ahaato mid la hagaajin karo laakiin muuqaal ahaan ugu yar. Sidaa darteed, kuma haysato qurxinta daaqadaha, laakiin waxay leedahay dhowr jillaab si ay u dejiso qaabeyntaada shaqsiyeed, iyo doorsoomayaasha si ay ula qabsadaan waxaad rabto.
Waxay gebi ahaanba ku tiirsan tahay kumbuyuutarka gelitaanka xogta. Sidoo kale, ma laha badhamno, astaamo, baararka cinwaanka, baararka aaladda, ama mid ka mid ah waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'GUI widgets'.
Naqshadeynta ku-saleysan Lisp waxay ka tarjumaysaa caan-baxa sii kordheysa ee WM-yada inay yihiin waxyaabo wax soo saar leh oo la beddeli karo.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "stumpwm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka ama tan kale isku xirka.
“Maareeyaha Daaqadda oo qayb ka ah (qayb ka mid ah) Degaanka loo yaqaan (Desktop Environment) isla magaca, oo lagu abuuray dadaal caalami ah oo mideysan si carruurta oo dhan loo siiyo fursad isku mid ah si ay u helaan waxbarasho tayo leh. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagu heli karaa in ka badan shan iyo labaatan luqadood, oo hawlahooda isku dhafan ay hadda u isticmaalaan maalin kasta iskuulada carruurta ka socota in ka badan afartan dal".
Iyada oo qayb muhiim ah ka ah mashruuca madal barasho oo dib u cusbooneysiisa habka kumbiyuutarada loogu adeegsado waxbarashada, kor u qaadista iyo dhiirigelinta wada shaqeynta, milicsiga iyo helitaanka qaab dhameystiran oo toos ah isdhaafsiga isticmaalaha.
Waxay kor u qaadeysaa "fekerka daraasadda" iyo "dhaqanka milicsiga", iyada oo ay ugu wacan tahay hufnaanta naqshadeynta (muuqaal ahaan / muuqaal ah) ee loo fidiyay carruurta iyo macallimiinta, maadaama ay u oggolaaneyso iyaga inay dib-u-habayn, dib-u-cusboonaysiiyaan oo ay dib u codsadaan labada software-ka. sida nuxurka ku jira waxqabadyada barashada ee awoodda badan
Qaabka sonkorta ee wadaagga, dhaleeceynta iyo sahaminta waxay ku saleysan tahay dhaqanka barnaamijka bilaashka ah ee loo yaqaan 'FLOSS'.
Waxaa badanaa loo tixgeliyaa inay ka badan tahay DE marka loo eego WM, maaddaama muuqaalkeeda garaafka ah badanaa loo arko macno kale oo ka duwan fikradda "Desktop" ee kombiyuutarka, maxaa yeelay waxaa loo arkaa inay tahay isku daygii ugu horreeyay ee halista ah ee lagu abuurayo isdhexgalka isticmaalaha. ku saleysan aqoonta iyo bulshada: bartayaashu waa inay ku lug yeeshaan sahaminta iyo iskaashiga.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "Python-sugar", "Python-sugar3" iyo "sucrose"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeraad ah oo ku saabsan WM waxaa laga heli karaa xiriiriyeyaasha soo socda: 1 link, 2 link y 3 link.
"AMAn Maareeyaha Daaqadda oo u shaqeeya sidii laxamiistaha nooca 'Tiling' ee loogu talagalay Wayland iyo beddel wanaagsan oo ah Maamulaha Daaqada i3 ee X11. Wuxuu la shaqeeyaa dejinta i3 ee jira wuxuuna taageeraa astaamaha i3 badankood, oo lagu daray qaar ka mid ah siyaado".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday waxyar ka badan 1 bil kahor, inkasta oo qaabkeedii ugu dambeeyay ee xasilloon uu ku dhowaad 2 bilood jirsaday.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si macquul ah u abaabusho daaqadaha dalabka, halkii aad ka ahaan laheyd goob ahaan. Daaqadaha waxaa lagu habeeyay shabaq la rakibo oo sare u qaadaya wax ku oolnimada shaashaddaada isla markaana si dhakhso leh wax looga qaban karo iyadoo la adeegsanayo kiiboodhka.
Waxay adeegsanaysaa "wlroots" si loogu bixiyo saldhig qaabaysan, si loogu fududeeyo horumarkiisa, isbadalkeeda iyo qaabaynteeda.
Ma taageerto mid ka mid ah wadayaasha sawirada lahaanshaha, oo ay ku jiraan darawalka lahaanshaha Nvidia. Isha furan ee wadaha Nouveau ayaa loo baahan yahay taa bedelkeeda.
"Maareeyaha daaqad fudud oo shaqeynaya ee X Window System".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaaday wax yar ka badan 2 bilood ka hor.
Waxay bixisaa baararka cinwaanka, daaqadaha qaabeeya, qaabab kala duwan oo maareynta astaanta ah, shaqooyinka macruufka lagu qeexay, diiradda-iyo-tilmaamida kumbuyuutarka, iyo furaha isticmaale-cayiman iyo badhanka tilmaamaha.
Waa barnaamij yar, oo lagu dhisay iyadoo la adeegsanayo Xlib, taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud marka la eego agabka nidaamka ee ay u baahan tahay. Oo inkasta oo ay fududahay, haddana si heer sare ah ayaa loo qaabayn karaa; noocyada, midabada, ballaca xuduudaha, badhamada cinwaanka cinwaanada, iyo waxyaabo kale, dhammaantood waxaa habeyn kara isticmaalaha.
Iskuxirkiisu wuxuu aad uga duwan yahay WM-yada casriga ah ee loo yaqaan 'DEs', qaar badan oo ka mid ahna waxay u muuqdaan inay u shaqeeyaan si la mid ah tan MacOS ama Windows, sidaa darteed adeegsadayaasha cusub waxaa badanaa laga yaabaa inay ku adkaato inay adeegsadaan iyaga oo aan aqrin dukumintigooda iyo / ama isticmaal muddo dheer.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "twm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka ama tan kale isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan kuwan soo socda 5 «Gestores de Ventanas», kana madax bannaan wax kasta «Entorno de Escritorio»loo yaqaan Steamcompmgr, StumpWM, Sonkor, SwayWM iyo TWM, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Steamcompmgr, StumpWM, Sonkor, SwayWM iyo TWM: 5 WMs kale oo loogu talagalay Linux
Librewolf iyo Librefox: Beddelka bilaashka ah ee Firefox ee ka baxsan Waterfox
Mastercard wuxuu bilaabay barxadda baaritaanka lacagaha dalwaddii loogu talagalay bangiyada dhexe